Abagibeli abayizinkulungwane be365 ngosuku abavela eMarmaray, 15 Julayi Martyrs Bridge Zuza ku-156 Izimoto Eziyizinkulungwane ngosuku | RayHaber
IkhayaTURKEYIsifunda saseMarmara34 IstanbulAbagibeli beMarmaray 365 Izinkulungwane zabagibeli ngosuku, i-15 Julayi Martyrs Bridge 156 Izimoto Eziyizinkulungwane Zizuza Usuku
08 / 11 / 2019 34 Istanbul, sesitimela, JIKELELE, izixhumanisi, Highway, KENTİÇİ Rail Systems, HEADLINE, Isifunda saseMarmara, Metro, TURKEY
marmaraydan izinkulungwane abagibeli ngosuku justyrs ukholo koprusunden izinkulungwane izimoto nsuku zonke
Abagibeli abayizinkulungwane be-365 Usuku olusuka eMarmaray, 15 Izinkulungwane Izimoto ngosuku olusuka kubhuloho labasakazi UNgqongqoshe uTurhan wabamba iqhaza ochungechungeni lokuqala lwezingqungquthela ze- “City and Law Talks” ezihlelwe nguFatih Sultan Mehmet Vakıf University Faculty of Law eHholo Con Campus Hall Hall.
Esethulweni sakhe esinesihloko esithi İstanbul Istanbul ngokuya Ngezinqubomgomo Zokuhamba, iTurhan yathi izidingo zabantu zokuhamba zivela ezikhathini zakudala kakhulu.
Eminyakeni yamuva nje, ikakhulukazi ngemuva komlando weRiphabhliki yase-Istanbul, ukwanda okusheshayo kwabantu, ukufudukela kwabantu emadolobheni okungahambi kahle nokwakhiwa kwavela ukuthi abantu abadluliselwa eTurhan, kepha izinsizakalo zezingqalasizinda ezazingahleliwe nazo zaletha izinkinga empilweni yabantu yansuku zonke.
INüfus Inani labantu base-Istanbul lenyuke ngenhla kwe-12 floor ”
UTurhan uthe enye yezinkinga ezibaluleke kakhulu zomhlaba wanamuhla yizinkinga zokuhamba. "Ngakho-ke, amazwe anokubaluleka okubalulekile kulezi zinkinga. Bazama ukunqoba le nkinga ngezinqubomgomo zokuhamba. Ngakolunye uhlangothi, amadolobha amakhulu, asephambili lapho izinkinga zokuhamba zifinyelela khona amazinga obuhlungu. Njengoba i-Istanbul ingenye yamadolobha amakhulu ahamba phambili omhlaba enabantu bawo abangaphezu kwesigidi se-15, sekuyisikhathi eside ingenye yezinto ezihamba phambili zenqubomgomo yezokuhamba.
UTurhan waveza ukuthi impikiswano enkulu ekuthuthweni kwe-Istanbul ukwanda kwesibalo sabantu bedolobha elingaphansi kwephiko le-70 yize kunyuswe isitezi se-3-4 ngonyaka owedlule we-12. Ngaphezu kwalokho, lapho singeza ngejubane elikhulayo lamapulatifomu ezentengiso nezentengiso asuselwa e-Istanbul esifundeni, isimo siba sibi kakhulu. Eqinisweni, ngombono wokubona, ukulungiswa kwengqalasizinda okudingekayo kwenziwa ngesikhathi futhi izinqubomgomo zokuhambisa ibhuloho bezingatholakali namhlanje.
"I-15 Julayi Inani lezimoto ezidlula eMartyrs Bridge ngosuku olulodwa lwe-156 ayinkulungwane"
UTurhan ukhumbuze ukuthi inkinga yokuhamba kwe-Istanbul kwakuyindaba yezindaba ezivela ku-45 eminyakeni edlule futhi yaqhubeka ngokulandelayo:
"Inani labantu bomuzi laliyizigidi ze-4. Ngaleso sikhathi, i-26 yayidlula izimoto eziyinkulungwane isuka eBosphorus Bridge futhi izakhamizi zakhala ngokuchitha isikhathi esingaphezu kwamahora we-1 ngenkathi zivela endaweni ethile ziye kwenye. Njengoba uyazi, ngaleso sikhathi, sasinabantu abanekhono nabanomthwalo wemfanelo ababenemibono ehlukene yokuthi leli bhuloho kumele lakhiwe noma cha. I-40-50 eminyakeni edlule, inkinga yomgwaqo e-Istanbul ibiyisihloko sezindaba ngomqondo wokuthi ukukhala kwakhala. Kodwa-ke, azikho izinyathelo ezithathiwe kulokhu. Namuhla isibalo sedolobha sisondele kwizigidi ze-16. Isibalo sezimoto ezibhalisiwe sizungeze i-4 million 200 ayinkulungwane futhi lokhu akukafiki endaweni yokugcwaliswa. I-15, okubizwa namuhla, inani lezimoto ezidlula eMartyrs 'Bridge ngosuku. Ngesikhathi sokuvula, bezungeze izimoto eziyizinkulungwane zama-156 namhlanje. Uma ucela ubungako bangempela bebhuloho, lapho ulilinganisa ngokwezinga lenkonzo, empeleni udinga ukudlula izimoto eziyinkulungwane ze-26 uma udlula kumabhuloho enkonzo ohambweni lokuhlangana njalo. Umthamo wokuxubana onobuhle kumthamo we-156 ayinkulungwane. Kepha njengamanje, izimoto ezibalelwa ku-90 eziyikhulu zidlula kuleli bhuloho ngosuku. "
IMümkün Njengoba senzile muva nje, kungenzeka ukuvimba inkinga yomgwaqo futhi inciphise nomthelela wayo ”
Ngokubona ukuthi lesi simo sithinta kabi izinto zokuhamba, uTurhan uthe:
Unuz Uzibona izinsiza zezingqalasizinda ezidlule kwamanye amabhuloho futhi sekuhlelwe ukuthi zihlanganiswe ngabaphathi bendawo esikhathini esedlule ukubhekana nenkinga yokuhamba e-Istanbul eminyakeni yamuva nje futhi eyakhelwe ukunciphisa ithrafikhi phakathi kwezinhlangothi ezimbili zeBosphorus. Simise uFatih Sultan Mehmet Bridge, Umhubhe wase-Eurasia kanye neYavuz Sultan Selim Bridge.
UNgqongqoshe uTurhan ukugcizelele ukubaluleka kwamaphrojekthi we-mega asetshenziswe e-Istanbul esikhathini esanda kwedlula futhi wathi, için Namuhla, akunakwenzeka ukuxazulula inkinga ngokuphelele kodwa kungenzeka ukuvimba ukwanda kwenkinga ngaphandle kakhulu futhi kunciphise ukusebenza kwayo. Lokhu kufaka phakathi kwezenhlalo yezomnotho, ezomnotho, ezobuchwepheshe, ingqalasizinda yezamasiko kanye nezimo zomthetho. Ngakho-ke, sihlangabezana nezinkinga eziyinkimbinkimbi neziningi kangaka. Uma sikhuluma ngezinqubomgomo zokuhamba ze-Istanbul, kufanele sibheke zonke lezi zinkinga. Ikakhulu i-show, izindlela zabantu abantulayo kufanele zigwenywe. Lezi zindlela ziphikisana nemvelo nomoya wezinqubomgomo zokuhamba. Uzokwenza ibhizinisi, uzokwenza iphrojekthi, uzophatha iphrojekthi, uzonikela ngezinsizakalo. ”
UTurhan uthe izinga lobunikazi bezimoto lizokwenyuka ngokuhamba kwesikhathi nokuthi kuzoba nezimoto eziningi nemigwaqo edingekayo emigwaqweni.
"Abagibeli abaphakathi kwezinkulungwane ze-365 bayazuza nsuku zonke eMarmaray"
UNgqongqoshe Turhan wathi amaphrojekthi abalulekile ayaqhubeka e-Istanbul futhi waphetha amazwi akhe ngokulandelayo:
Uz Sisebenza kanzima futhi ngenkuthalo ukuthwala ingqalasizinda yezokuhamba e-Istanbul esikhundleni esimfanele inkazimulo yayo, usayizi kanye nokungahle ngamaphrojekthi aqediwe, aqhubekayo futhi abhekiswe kuwo. IMarmaray, eyafakwa emkhosini wokukhumbula i-90 wokusungulwa kweRiphabhulikhi yethu, yayingesinye sezindondo ezibaluleke kakhulu kulokhu. Ngenkathi uhlelo lokuhamba lweMarmaray i-5,5 belunikeza usizo esitobhini phakathi nonyaka, i-5 isiqalile ukusebenza ne-43 kanti abagibeli abayinkulungwane be-365 bayazuza nsuku zonke kulolu hlelo. "
I-15 July Martyrs Bridge izovuselelwa
I-15 Julayi Martyrs Bridge Route on the O1 Motorway…
I-FSM ne-15 Martyrs ezivela kuMnyango WezokuThutha Temmuz
Amadokodo we-15 kaJulayi aseTholeni asuka eMartyrs Bridge
I-15 Julayi Martyrs Bridge phakathi kwamabili bu
Samsunda Trams Carry 65 Thousand Abagibeli ngosuku
I-365 Bus Line eKocaeli ilandelwa ukusuka lapha
Kusuka e-Osmangazi Bridge, i-3 iyona engena
I-GAZİRAY 100 Abagibeli abayizinkulungwane bayothuthukiswa
Abashayeli be-Driverless Metro 4 292 Thousand 344 Abanjwe Ngosuku
I-Üsküdar-Çekmeköy Metro Line Ngosuku Lokuqala 179 Bin 612 İlk